Donald Trump oo kalaabtay inta badan balan-qaadyadii uu sameeyey xiligii ololaha | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Donald Trump oo kalaabtay inta badan balan-qaadyadii uu sameeyey xiligii ololaha
Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ka laabtay balan-qaadkiisii ahaa inuu baabi’inayo qeybo ka mid ah barnaamijka caafimaadka ee uu sameeyay Madaxweyne Obama.
Donald Trump ayaa si weyn ugu ololeeyay inuu meesha ka saari doono barnaamijka madaxweyne Obama ee ku aaddan in shacabka Maraykanka ay helaan adeeg caafimaad oo qiimo ahaan ay awoodi karaan.
barnaamijkaasi oo loo yaqaano ObamaCare ayuu horey u sheegay inuu yahay mid musiibo ah, iyadoo fekerkaas ay la qabaan madaxda xisbiga Jamhuuriga.
Hase ahaatee Madaxweynaha la doortay ayaa waraysi uu siiyay wargeyska Wall Street Journal waxa uu sheegay, inay u badan tahay inuu daayo qeybo ka mid ah barnaamijkaasi oo uu ku tilmaamay mid uu aad u jecel yahay.
Mr Trump ayaa hadda u muuqda mid ka laabtay dhowr ka mid ah ballanqaadyadii uu sameeyay markii uu ololeynayay.
Kaddib toogashadii ka dhacday San Bernardino ee ay ku dhinteen 14 qof, Trump waxaa uu ku baaqay in Muslimiinta laga mamnuuco Mareykanka iney soo galaan basle arrintaasi ayaa la wada cambaareeyay. Dadkii baaqaasi cambaareeyay waxaa ka mid ah Pence oo hadda ku xigeen u noqonaya Trump.
Waxay u muuqataa in Trump inuu arrintaasi ka tanaasulay, isagoo taa bedelkeed doonaya in si adag loo baaro marka ay soo galayaan.
Waxyaabihii uu Trump ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in kala xirayo Mareykanka iyo Mexico oo uu darbi dhexdooda ka dhisi doono.
Waxaa la saadaalinayaa in fulinta balan-qaadkaasi ay ku adkaan doonto maadaama derbigaas ay ku baxeyso 25 bilyan oo dollar waxaana aad u adag in qarashka intaas le’eg la helo.
Trump ayaa sheegay in uu musaafurin doono 11-ka milyan ee qof ee dalkaasi sharci darrada ku jooga, qorshaha masaafurinta dadkaas waxaa ku bixi karta balaayiin dollar, weyna adag tahay in labada aqal ay ansixiyaan qorshahaas.